Big Brother set to launch in Zimbabwe - NexTV News Africa
The new show will be named One House Zimbabwe and the winner is set to walk away with US$50 000. The reality show, which is a first of its kind in Zimbabwe will be launched on this weekend.
Prince Mudzingwa (known as Mr Styllz), one of the organisers of the show, said the show is aimed at promoting Zimbabwean culture and showcasing the country’s raw talent.
“We noticed that whenever there’s Big Brother Africa, the show draws the attention of the majority of Zimbabweans who follow it up until the end. We also realised that most Zimbabweans who have participated in that show, like Pokello, have gone on to become brands to reckon with, something we want to achieve with One House Zimbabwe,” Mr Styllz said.
The show is set to be aired on international platforms that will help in spreading the Zimbabwean culture.